warkii.com » Shaxda Adag Ee Manchester United Ay U Diyaarsatay Leicester City & Xiddigaha Dhaawaca Kasoo Laabtay Ee U Dhaarsan Badbaadinta United
Shaxda Adag Ee Manchester United Ay U Diyaarsatay Leicester City & Xiddigaha Dhaawaca Kasoo Laabtay Ee U Dhaarsan Badbaadinta United
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku sifeeyey ciyaarta ay Manchester United ay ku waajahayso Leicester City, inay tahay ciyaar ‘final’ ah, sababtoo ah, waxa ku xidhan rajada Red Devils ee Champions League.
Tababaraha reer Norway ayaa shaxdiisa ugu adag ee uu heli karayo u diyaarsanaya kulankan oo Man United ay u baahan tahay inay guul weyn kala soo hoyato si ay kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League ugu dhamaysato xili ciyaareedkan.
Laakiin xataa barbarro ay King Power kusoo galaan, waxa uu uga dhignaanayaa Manchester United sidii guul oo kale maadaama ay kaalinta afraad ku dhamaysan doonaan haddii ay Chelsea badiso, laakiin haddii Blues laga adkaado ama ay barbarro lasoo gasho Wolves na ay xajisan doonaan booska saddexaad.
United oo Arbacadii iska lumisay fursad ay laba dhibcood kaga sarrayn lahayd Chelsea oo afraad fadhida, isla markaana barbarro la gashay West Ham United oo Old Trafford ugu timid, waxay dib u helaysaa shaxeeda ugu adag iyadoo uu dib ugu soo laabtay tababarka Luke Shaw oo dhaawac looga saaray kulankii Southampton ee July 13 oo ay isagana lumiyeen fursad ay qaali ah oo ay kaga sarrayn lahaayeen Chelsea iyo Leicester oo toddobaadkaas laga badiyey.
Sidoo kale, waxa Red Devils usoo laabanaya difaaca reer Ivory Coast ee Eric Bailly oo madaxa dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii semi-finalka FA Cup ee Chelsea ay sida xun ugu soo garaacday.
Aaron Wan-Bissaka oo kaydka kusoo bilowday kulankii West Ham, qaybtii dambena beddelay Timothy Fosu-Mensah ayaa la filayaa in ciyaarta Axadda uu difaaca midig qabsan doono, halka uu Shaw dhinaca bidix istaagi doono haddii uu si buuxda taam u noqdo.
Tababare Solskjaer oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wax walba suurtogal yihiin oo ciyaartoydani dhaawaca ku seegi karayaan ciyaarta Leicester, sidoo kalena ay fursad u haystaan inay ciyaaraan, waxaanu yidhi: “Waxaanu doonaynaa inaanu ciyaartoyda dhaawaca ah siino waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah. Wax walba waa suurtogal.”
Hadalkan ayaa loo turjumay dagaal maskaxeed si aanay Leicester usii diyaarsan qorshe ay culays ku saarto Shaw ama Wan-Bissaka, waxaana loo badinayaa inay taam noqonayaan maadaama uu Wan-Bissaka qaybta dambe ee kulankii West Ham ciyaaray, halka uu Shaw tababarka si caadi ah ula qaadanayay naadigiisa Khamiistii iyo Jimcihii.
Difaaca dhexe ayay xajisan doonaan Harry Maguire iyo Lindelof, waxaana ka horreynaya Matic iyo Pogba oo taam ah, halka uu Fernandes hore ugu socon doono lambar toban oo uu caawin doono Martial, Rashford iyo Greenwood.
Shaxda macquulka ah ee Manchester United kula ciyaari doonto Leicester City